बेवास्ता नगरौं, घटेको छैन कोरोना कहर : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार बेवास्ता नगरौं, घटेको छैन कोरोना कहर
रोकथामका उपायहरू अपनाउँदा अपनाउँदै पनि देशभर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा कमी आएको देखिँदैन । तर पनि सुरक्षा सर्तकता अपनाउने प्रवृत्तिमा कमी हुदै जान थालेको छ । मास्क लगाउनेको संख्या दिनानुदिन अट्दो छ । जसका कारण पनि भित्रभित्रै कोरोना संक्रमण फैलन पुगेको चिकित्सकको भनाइ छ । कोरोनाविरुद्ध खोप चलिरहेको छ । रेन्डेसिभिर औषधि पनि खाएको र त्यसले पनि ठीक नै गरेको रिपोर्ट आइरहेको छ । तर, पनि कोरोना संक्रमणको जोखिममा कमी आएको अनुभूत भएको छैन । अहिले पनि कोरोन संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा १ प्रतिशतभन्दा बढी नै छ । चिकित्सकका अनुसार सुरक्षा मापदण्डको पालना नगर्नु नै यसको प्रमुख कारण हो । उनीहरू दाबी गरिरहेका छन् कि मास्कको समुचित प्रयोग गरिएको छैन र भौतिक दूरीलाई बेवास्ता गरिएको छ । राजधानी सहर काठमाडौंमा नै पनि यस्तोखाले उच्च सतर्कताको निकै कमी छ । कोरोना पचेको वा पचाएको झैं देखिन्छ । तर, मृत्यु हुनेको संख्या र संक्रमित हुनेको परिमाण हेर्दा कोरोना संक्रमण उति नै भयावह रहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कुल संक्रमित २ लाख ७३ हजार ९ सय ८४ जनामध्ये २ हजार ७ सय ७१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
यो तथ्यांकलाई हेर्दा चिकित्सकको विश्लेषण सही पनि देखिन्छ । मानिसले मुखमा मास्क लगाएका त देखिन्छन् तर त्यसको समुचित प्रयोग भैरहेको छैन । कुरा गर्दा मास्क फुकाएर खुल्लमखुला कुरा गरिरहेका हुन्छन् । हाछ्य्ुँ गर्दा मास्क खोलेर हाच्छिउँ गर्ने गरिरहेका छन् । कसैकसैले चिउँडोमा मास्क लड्काएर वेवास्तापूर्वक यात्रा गरेका वा हुलमुलमा हिँडिरहेका देखिन्छन् । अरू कसैले छेउमा बसेका मानिसले टिप्पणी गरेमा वा रिसाएमा मात्र यसो मास्क मुखसम्म तानेको देखिन्छ । अधिकांश चालक र सहचालकले मास्क नै प्रयोग गर्दैनन् । कतिपयले त प्रहरी देखे मात्र मास्क लगाउने गरेका छन् । माथिका यी मास्कधारीमध्ये ५० प्रतिशतले नाक छोपेको देखिँदैन । यसले पनि गरेको जस्तो त गर्ने तर ढंग नपुगेर झारा टारेझैं हुने गरेको छ । यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा साधरण जनताको स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । यसले जनस्वास्थ्यमा ठूलो समस्या खडा गरिरहेको छ । यो आफैंमा मामुली रुघाखोकी वा मौसम परिवर्तको असर होइन, यो त ज्यानमारा महामारी हो । विश्वमा यसले निकै तवाह ल्याइरहेको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
कोरोना महामारी आफंैमा आजको भोलि निको हुने रोग होइन । यो रणनीतिक असर बोकेर आएको हुन्छ । यसका विविध प्रजाति र त्यसमा पनि नयाँ नयाँ संस्करणमा यसको विकास हुने गर्दछ । भनिन्छ, हालसम्म कोरोनाले ४ हजारपटक आफूलाई नयाँनयाँ बनाएर ‘अपडेट’ गरिसकेको छ । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या घटे पनि जोखिम भने उत्तिकै कायम रहेको देखिन्छ । तर आमनागरिकले पनि कोरोना भन्ने केही होइन भनेर हेलचेक्रयाइँ गरेको पाइन्छ । यसका लागि मास्कको समुचित प्रयोग, भौतिक दूरी कायम र व्यक्तिगत सरसफाइ विशेष जरुरी रहेको कुरा बिर्सनुहुँदैन ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले निर्यात क्षमता ११ खर्ब पुग्ने आँकलन गरेको छ ।...
तीन दलको बैठक : बिना निष्कर्ष टुंगियो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर...
चक्रब्युहमा नेपाली राजनीति
प्रारम्भ: माओवादी केन्द्रसँग चुनावी एकता गर्दै अघि बढेको एमाले र माओवादी केन्द्र अन्ततः दलीय एकता भंग गर्दै पुनः आआफ्नै कित्तामा खुम्चिन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री...
बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा जारी रहेकै बेलामा पनि निर्माणसम्बन्धी काम र उपभोग्य सामग्रीको ओसारपसारलगायतका केही अत्यावश्यक काम रोकिएनन् । यतिबेला भएका कामको सिलसिलामा उठ्नुपर्ने राजस्व...
बिचार Kumar Raut - February 24, 2021 0
प्रचण्डका राजनीतिक गुरु कुँवरको निधन
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - January 26, 2021 0
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका राजनीतिक गुरु पुराना वामपन्थी नेता खम्बासिंह कुँवरको निधन भएको छ । मधुमेह, उच्च...
Not-to-be-missed Prem Shyangtan - February 27, 2020 0
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साम्यवादसम्म नपुग्दा पार्टीभित्र विवाद र वहस भइरहने बताउनुभएको छ...
Breaking News Dhruba Lamsal - November 28, 2020 0
सप्तरी । सात वर्षीया बालिकालाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा ७६ वर्षीय वृद्ध पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका–५ लोहजराका लक्ष्मी महतो रहेको...
मोटरसाइकलले अटोलाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु, ५ जना घाइते
तुलसीपुर । मोटरसाइकलको ठक्करबाट अटो रिक्सा अनियन्त्रित भएर पल्टिदा दाङको तुलसीपुरमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु...
Exclusive Kumar Raut - August 31, 2020 0
काठमाडौं । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य र स्थायी सरकारको गठनपछि आधार तय भएर गति लिने क्रममा रहेको समग्र क्षेत्रको पूर्वाधार तथा विकास निर्माण पुनः धरमराएको...
लोकतन्त्र, बहुलवाद र संघीय नेपाल
बिचार Kumar Raut - November 2, 2020 0
संघीयताले यथार्थतामा जनतालाई मालिक बनाउँछ । सरकारको उपस्थिति जनताको घरदैलोमा हुने गर्दछ । समान अधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा अभिमुख हुन्छ । आफ्नो भविष्यको...
अर्थ पूर्णभक्त दुवाल - March 10, 2021 0
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको विकाससँगै अबको एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र एक सय मिलियन डलर अर्थात् एक सय खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने...
वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने पक्राउ
प्रदेश Sushila Bishwokarma - February 10, 2020 0
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय अपराध नियन्त्रण महाशाखको टोलीले सोलुखुम्बु घर भई भक्तपुर...
नेयमारले बार्सिलोनालाई जरिमाना
खेल Kumar Raut - June 21, 2020 0
मड्रिड । फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)का ब्राजिलियन स्टार फरवार्ड नेयमार जुनियरले आफ्नो पूर्वक्लब बार्सिलोनालाई ६.७ मिलियन युरो तिर्नुपर्ने भएको छ । नेयमारले सन्...
ध्रुव लम्साल - April 13, 2021
श्रीप्रसाद प्रसाईं - April 14, 2021